🥇 kaonty amin'ny salon tsara tarehy
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 946
Lahatsary momba ny kaonty ho an'ny salon tsara tarehy
Mandidia kaonty amin'ny salon tsara tarehy
Ny kaonty amin'ny salon hatsaran-tarehy dia dingana iray miasa ary misy fiasa manokana maro, izay tsy ilaina amin'ny sehatra hafa amin'ny asa aman-draharaha toy izany. Indraindray mety hitranga fa ny talen'ny orinasa dia manome ny safidiny amin'ny programa fikolokoloana sy fikolokoloana salon amin'ny hatsaran-tarehy izay maniry ny hampihena ny vidiny araka izay tratra. Vokatr'izany dia miatrika ny tsy fahampian'ny fotoana hikarakarana sy handalinana antontan-kevitra marobe amin'ny fitantanana orinasa izy, ary koa ny fitantanana, ny rakitra ary ny kaonty kaonty, ny fikojakojana ny statistika amin'ny salon fanatrehana ny mpanjifa, ny fitantanana asa manampahaizana. , fanaraha-maso rafitra sy bonus misy fihenam-bidy sy fihenam-bidy ary hetsika maro hafa. Amin'ity tranga ity, ny fitaovana tsara indrindra hanatsarana ny fizotry ny famokarana an'ity orinasa ity dia ny fampidirana ny programa kaonty USU-Soft ho an'ny salon fanaovana hatsaran-tarehy. Izy io dia heverina ho programa tsara indrindra amin'ny orinasan-tarehy hatsaran-tarehy ary afaka mandefa haingana ny kaonty ara-pitaovana, ary koa ny fitantanana ny mpiasa sy ny fitantanana ao amin'ny salon hatsaranao. Ny rindrambaiko fitantanana kaonty USU-Soft salon manampy anao hitahiry firaketana ara-potoana mifototra amin'ny fampahalalana azo antoka vokarin'ny fahaizan'ny programa kaonty. Ny rafitra USU-Soft momba ny fitantanana kaonty sy fandraharahana an'ny salon hatsaran-tarehy dia mifanaraka tanteraka amin'ny filan'ny orinasam-pandraharahana rehetra: salon salehim-borona, studio fanaovana hatsaran-tarehy, salon amin'ny fantsika, spa spa, salon fanaovana hodi-biby, studio fanaovana tombokavatsa, salon fanorana, sy ny hafa. Ny USU-Soft ho rafitra fitantanam-bola sy fikojakojana ny salon hatsaran-tarehy dia nanaporofo hatrany fa tamin'ny jiro tsara teo amin'ny tsenan'ny Repoblikan'i Kazakhstan sy ireo firenena CIS hafa. Ny programa momba ny kaonty USU-Soft dia manamarika noho ny fahatsorany sy ny fahafahany miasa, ary koa ny fahaizan'ny systematize sy ny famakafakana ny mombamomba ny valin'ny salon hatsaranao amin'ny fotoana rehetra. Ny programa fikojakojana salon sy hatsaran-tarehy USU-Soft dia mora ampiasaina ihany koa toy ny talen'ny talen'ny fitantanana na ny talen'ny salon hatsaran-tarehy ary koa ny mpiasa vaovao. Vokany iray tena lehibe amin'ny fametrahana ny programa kaonty USU-Soft dia izao dia manara-maso ny analytics rehetra ianao ary mahafantatra momba ny làlan'ny fanatsarana ny orinasa, izay mila arahi-maso tsy tapaka.
Ny tatitra isan-karazany dia manampy amin'ny fifehezana ny orinasan-tarehy hatsaran-tarehy. Ny programa fitantanam-bola dia manome fanampiana sarobidy ho an'ny lohan'ny salon hatsaran-tarehy izay manome azy fotoana mety handray fanapahan-kevitra lehibe momba ny fitantanana. Ny programa fitantanam-bola amin'ny automatisation sy ny fitantanana ny asan'ny salon hatsaran-tarehy dia manome anao fanampiana lehibe, manafaingana ny dingan'ny fidirana sy famoahana vaovao. Ny programa fitantanana orinasa dia mamela ny foibe hatsaran-tarehy hametraka famakafakana ireo hetsiky ny studio hatsaran-tarehy, izay hanome fotoana ireo mpiasa hanafaka ny fotoanany amin'ny asa mahazatra tsy ilaina. Andao hofariparitana ireo fiasa sy tombontsoa azo avy amin'ny USU-Soft ho programa fitantanana salon salantsalona (studio hatsaran-tarehy, spaoro, spa spa, solarium, studio tattoo, sns.). Raha manana fivarotana ny salon hatsaranao, dia azonao antoka fa tianao ny fomba ahafahanao miasa amin'ny vokatra ao amin'ny programa kaonty ho an'ny salon hatsaran-tarehy. Azonao atao ny manamboatra statistikan'ny latabatra isaky ny sokajy sy sokajy entana, ary koa ny fanehoana an-tsary ny habetsaky ny vola azo avy amin'ny varotra isaky ny sokajy amin'ny alàlan'ny sary. Ny angon-drakitra dia ahitana ny isan'ny entana amidy miaraka amin'ny refy fandrefesana ary ny totalin'ny varotra. Eo amin'ny farany ambanin'ny vondrona vokatra tsirairay dia azonao atao ny mahita ny valiny arakaraka ny sokajy sy ny sokajy misaraka, ary ao amin'ny 'lakaly' ny tatitra momba ny tabilao dia misy ny sanda totalin'ny vanim-potoana manontolo. Toy ny maro hafa, ity tatitra ity dia namboarina niaraka tamin'ny sary famantarana anao sy ireo fanondroana voafaritra rehetra. Ao amin'ny faritra fitetezana ankavia ny tatitra dia afaka misafidy sokajy na sokajy iray ianao hifindra ho azy amin'ny statistika. Azonao atao ny manondrana mora foana ny tatitra amin'ny iray amin'ireo endrika elektronika maoderina, ohatra, handefasana angona ho an'ny mpitantana amin'ny alàlan'ny mailaka. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mampiasa ny baiko 'Export'. Azonao atao ny manonta tatitra rehetra. Mba hanaovana izany, kitiho ny baiko 'Print', safidio ny mpanonta ary farito ny isan'ny kopia na ny toerana hafa hanaovana pirinty.
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny asan'ny orinasa rehetra dia ny olona, izany hoe ny mpanjifa tonga mahazo serivisy ary mandoa vola amin'izany. Raha tsy misy azy ireo dia ho ringana ny orinasanao. Ny olona no fototry ny fisianao. Izany no antony tsy maintsy hanaovanao izay rehetra azo atao mba hisafidianan'ny mpanjifa anao. Ahoana no ahatanterahanao izany? Mila ny ho tsara indrindra amin'ny serivisy ianao, amin'ny fomba ifandraisanao amin'ny client sy amin'ny hafainganan'ny serivisy. Tsy azo atao ny manatratra raha tsy misy teknolojia maoderina sy programa fitantanana kaonty vaovao izay mamela anao hanatsara ny asan'ny orinasanao. Noho ny rindrambaiko, afaka manadino mandrakizay ny asa miadana ianao, ny hadisoan'ny mpiasa ary ny tsy fahafaham-po an'ny mpanjifa! Ny hany mila ataonao dia ny mandray dingana lehibe (mividiana ny rafitray) ary ento any amin'ny ambaratonga manaraka ny orinasanao. Raha matahotra ianao fa tsy ho vitanao ny hiatrika an'io asa io dia manome toky anao izahay fa manome fanohanana ara-teknika tena tsara ny orinasanay. Tsy handao anao izahay mandra-pianaranao amin'ny fomba feno ny fomba fampiasana ilay application! Mifandray hatrany ny vondrona mpanohana anay. Tsy misy olana izay tsy voavahan'izy ireo, satria matihanina tsara ireo mpiasanay.